1. UMsebenzi woVavanyo okuMgangatho ofanayo (Common Assessment Task (CAT)) kwisifundo soLwazi ngezoBomi (Life Orientation (LO)) wawubhalwe nge-08 Septemba 2017 ngokweNgcaciso eMfutshane yoLawulo loVavanyo 0011/2017.
2. Abafundi abangakhange bayibhale i-CAT ye-LO nge-08 Septemba ngenxa yezizathu eziphathekayo, baya kuvunyelwa ukuba babhale i-CAT ye-LO yokuxabangela (supplementary CAT for LO) ecwangciselwe owe-10 Oktobha 2017 ukususela ngo-09:00 ukuya ku-11:00.
3. Kule meko, "izizathu ezisemthethweni" zibandakanya oku kulandelayo:
ukugula, okuxhaswa sisatifikethi sokugula esisemthethweni, esikhutshwe ngugqirha obhalisiweyo (registered medical practitioner);
izizathu eziphenjelelwa luvelwano lobuntu ezibandakanya ukusweleka kwelungu losapho elisondeleyo kumfundi ezixhaswa yikopi yesatifikethi sokusweleka;
umfundi oya kuvela enkundleni yamatyala, yaye oko makuxhaswe bubungqina obubhaliweyo;
nasiphi na esinye isizathu esinokwamkeleka njengesizathu esisemthethweni yiNtloko yovavanyo okanye ngummeli wayo.
4. Amaxwebhu abubungqina aphathelele kuzo naziphi na izizathu ezisemthethweni kwezi zingentla makagcinwe efayilini esikolweni yaye makenziwe afumaneke kwaNdlunkulu okanye kwisithili xa eceliwe.
5. IsiHlomelo A, esiqhotyoshelwe kule Ngcaciso iMfutshane yoLawulo loVavanyo, masizaliswe yaye masithunyelwe nge-imeyili apha: Gail.Laguma@westerncape.gov.za ungadlulanga owe-29 Septemba 2017.
6. Ziyacelwa iinqununu zenze amalungiselelo ayimfuneko okuqhutywa kolu vavanyo yaye maziqinisekise ukuba isikolo siyayithobela yonke imiqathango nemigaqo emalunga neemviwo zeSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate (NSC)).
7. Ii-ofisi zezithili ziya kuzinika izikolo isikhokelo sokumakishwa se-CAT ye-LO yokuxabangela. I-ofisi yesithili iya kuqinisekisa ukuba ukumakishwa kwephepha lokuxabangela, kumodareyithwa ngaphakathi esikolweni kwakunye nangaphandle yi-ofisi yesithili.
8. Abafundi abangayibhalanga i-CAT ye-LO okanye i-CAT ye-LO yokuxabangela ngo-2017 baya kufumana iziphumo ezingaphelelanga kwisifundo se-Life Orientation. Aba bafundi kuya kufuneka basiphinde isifundo, kuqukwa i-SBA ne-CAT ye-LO.
9. Kucelwa wazise ngale ngcaciso kubo bonke ootitshala nabafundi beSifundo seLife Orientation ukuze bayithathele ingqalelo.
IsiHlomelo A: "Common Assessment Task (CAT) for Life Orientation (LO) absentees" (ubukhulu: 53 KB)